सियोदेखि दियोसम्म र छानादेखि खानासम्म पुर्‍याउन आपूर्ति व्यवस्था सहज हुनुपर्छ
2015-12-14 बिष्णु बुढाथोकी
Q.अहिले संसद बैठक निरन्तर अबरुद्ध भइरहेको छ। के कारणले यो गतिरोध उत्पन्न भएको हो?
-हामो पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो। एउटा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक, अर्को भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक। यी दुबै विधेयकलाई अघि बढाअौं र अहिले देशले भोगिरहेको संकट टारौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक बीचबाटै गायब भयो। त्यसपछि हामीले यो कहाँ गयो भनि प्रश्न गर्यौं। हामीले प्रश्न गरेपछि सभामुखले संसद बैठक अवरुद्ध भयो भन्दै बैठक स्थगित गरिदिनु भयो। अहिलेको कुरा त्यत्ति हो।
सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छटपटाहटका कारण भुकम्प पीडितलाई मर्का परेको बेलामा पनि प्राधिकरण विधेयक कांग्रेसले रोक्यो भन्ने आरोप तपाईंहरूमाथि लागेको छ नि।
प्राधिकरण विधेयक हामीले रोक्ने भन्ने त सवालै छैन। हामी कुनै पनि हालतमा प्राधिकरण विधेयक रोक्न चाहदैनौं र रोक्न चाहेका पनि छैनौं। बरु एमालेले पहिलेदेखि नै यो प्राधिकरण विधेयकमा अनेकौ अडचन् ल्याएर ५०औं संशोधन हालेर यो विधेयकलाई अड्काएको हो। अहिले जो जो सत्तामा छन् तिनीहरूले नै सदनबाट यो विधेयक सोझै पास नगरी अनेकौं बहानामा अल्झाएर आखिरीमा समितिमा पठायो। हामी त प्राधिकरण विधेयक चाँडै पास होस् र जनताले राहत पाउन भन्ने पक्षमा छौं।
Q.प्राधिकरण विधेयक अहिले पास गर्न दिउँ र अरु कुरा पछि विस्तारै गर्दै जाउँ भन्दा के बिग्रन्थ्यो त?
-अब मुख्य कुरा के हो भने, संशोधन विधेयक जसले मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्थ्यो त्यसमा दुईवटा कुरामा संशोधन प्रस्ताव छ। एउटा त मधेसको भावना अनुसार जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव। अर्को समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव। यी दुई कुरा नै वास्तवमा मधेसमा आम जनताको चाहना छ। त्यो कुरालाई पारित गरेर अहिलेको देशमा जुन संकटसँगै आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोध छ त्यसलाई सहज गराउने उद्देश्यले हामीले यो विधेयक अगाडि बढाउ भनेका हौं। हामीले जुन उद्देश्यले यी विधेयकहरू ल्याएका थियौं त्यसमा संविधान संशोधनको विधेयक कार्यसूचीबाट गायब गरियो। जबकि हामीले ल्याएको त्यो प्रस्ताव आज देशका जनतालाई राहत दिन अझ बढी महत्वपूर्ण छ। भूकम्प पीडित जिल्लाको क्षेत्रमा पनि आयोग र कमिटी बनाएर मात्रै त केही पनि हुँदैन। त्यहाँ त निर्माण सामाग्री सहज रुपमा पुग्नु पर्यो। पीडितका लागि घर बनाउनु पर्यो। पीडितलाई ओत दिनु पर्यो। ओत दिनलाई पनि आपूर्ति सहज नभएसम्म त केही पनि सम्भव छैन। गाडी चल्दैन, यातायात सेवा बन्द छ, ढुवानीका साधान केही चल्दैन र सामाग्री ढुवानी हुन सक्दैन। निर्माण सामाग्री केही पनि नगएपछि पीडितले घर कसरी बनाउन पाउँछन् र मानिसले ओत कसरी पाउछन? मेरो मुख्य कुरा के हो भने यो पहिलेदेखि नै कार्यसूचीमा आइरहेको विषय हो। जुन विषय प्राधिकरणभन्दा पनि मुख्य विषय हो। किनभने भूकम्प प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लालाई सम्बोधन गर्छ भने हाम्रो यो प्रस्तावले पूरै देशलाई प्रभावित गर्छ र भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई पनि यसले सहयोग गर्छ र राहत दिन्छ। किनभने आपूर्ति सहज हुने वित्तिकै त्यहाँ निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न सहज हुन्छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर बनाउने इन्जिनियर र प्राविधिकसँगै अरु मानिस जानसक्छन्। अरु राहत सामाग्री जान सक्छ र जनतालाई राहत दिन सकिन्छ। मुख्य त भौतिक रुपमा जनतालाई सुविधान दिने वातावरण पहिले चाहियो नि। अहिले कानुन मात्रैको कुरा नै ठूलो कुरा भएन। त्यसो भएकोले भूकम्प प्राधिकरण विधेयकलाई कांग्रेसले रोक्न कतै पनि चाहेको होइन। यो जाओस् हामी त जहिले पनि तयार छौं। तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। यो संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढेर पारित भयो भने यस्ले यो आन्दोलनलाई मत्थर गर्छ र आपूर्ति सहज हुन्छ। आपूर्ति सहज भएपछि भूकम्प पीडित जिल्लाले पनि राहत पाउँछन् र उनीहरूलाई ओतदिने काम पनि बल्ल हुन्छ।
Q.त्यसो भए संशोधन विधेयक पारित नभई केही हुदैन?
-हो यो विधेयकले भूकम्प पीडितका लागि दियोदेखि सियोसम्म पुर्याउन र उनीहरूलाई छानोदिने देखि मानो दिनेसम्म काम अझ प्रभावकारी हुन्छ। नत्र पुननिर्माण प्राधिकरणमा कामै हुदैन। त्यो नभइ प्राधिकरणले के काम गर्छ? यो जादुको छडी त होइन नि। त्यसका लागि निर्माण सामाग्री त चाहियो नि। मानिसका लागि आवास दिनका लागि निर्माण सामाग्री यहाँ रोकिएको छ त्यो चिज खुलाउनु पर्यो नि। त्यसकारण हामी त समस्याको मुल जरोमा गएर समाधान गर्न र जनतालाई राहत दिने पक्षमा छौं।
Q.यति महत्वपूर्ण विषयमा त सरकार र सत्तापक्षले पो लबिङ गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्दा पनि साथ दिएन है?
-होइन यो सरकार केबल एकतर्फी राजनीति मात्रै गरेर देखाएर लौ कांग्रेसले केही गर्न दिएन भन्ने प्रचार गरिरहेको छ। यसले यत्ति देखाएर मात्रै त्यसमा सन्तुष्टि लिएको छ। सरकार त केबल आत्मरतिमा रमाएर कांग्रेसले अपजस पाएको छ हामीलाइ त के भएको छ र भनि बसिरहेको छ। त्यो त इमान्दारिता होइन नि। अहिले त मूल रुपमा पीडित जनताले ओत पाउनु पर्यो नि। भूकम्प पीडित जनताकै लागि राहत दिनका लागि हामीले यो भनिरहेका छौं।
Q.यो विषयमा सरकारका प्रधानमन्त्री र एमाओवादी नेता प्रचण्डसँग कुरा भएको छैन? भएको भए के भन्नु हुन्छ उहाँहरू?
-उहाँहरूले अहिले केही पनि भन्नु भएको छैन। उहाँहरूले मधेसी मोर्चालाई मनाउन सक्नुहोस्, संविधान संशोधन विधेयकसँगै प्राधिकरण विधेयक पनि दुबै ल्याउन सके सक्नुहोस् नसके नसक्नुहोस् भने जस्तो गरिरहनु भएको छ। आफूले जिम्मेवारी लिने र देखाउने काम गर्नु भएकै छैन।
Q.मोर्चाको भनाइ के छ यसमा?
-मोर्चाको त आफ्नो आन्दोलन हो। हामी आफ्नो आन्दोलनमा छौं र आन्दोलन गरिरहेका छौं। उहाँहरूको त्यो भन्दा बढी केही छैन।
Q.उहाँहरू यो मुद्दा सल्टाउन चाहनु हुदैन त?
-उहाँहरू सबै कुरा प्याकेजमा डिल गर्ने अड्डि लिइरहनु भएको छ। उहाँहरू सीमांकनदेखि भएभरका सबै कुरा यही मौकामा सुल्झाउँ भनि अप्ठयारोमा अक्कर समातिरहनु भएको छ।
Q.यो अवस्थामा अब यहाँहरू के गर्नु हुन्छ?
-हामी सबैसँग छलफल गर्छौ। मधेसी मोर्चासँग पनि फेरि कुरा हुँदैछ र हामी तीन पक्षबीच पनि फेरि कुरा गर्छौ। सकेसम्म हामी यो समस्याको समाधानका लागि जरामा पुगौं भनी सबैलाई भन्छौं।
Q.भनेपछि समस्या समाधान नभएसम्म हाउस अगाडि बढ्दैन?
-हाउस अगाडि बढ्दैन पनि हामी भन्दैनौ। हामीले भनिरहेकै छौ कि, हाउस रोक्न हामीले चाहिरहेका पनि छैनौं कहाँ चाहेको छौं?
Q.सभामुखले कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक किन हटाएको भन्नुभयो?
-त्यो दिन सभामुखले हाउस अलि चाँडै बन्द गरिदिनुभयो। त्यही दिन उहाँले भोलिको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने विषयमा ध्यानाकर्षण भयो भन्नुभएको थियो। विस्तारै सदस्यहरू सम्हालिएर बस्दै थिए। उहाँहरू सम्हालिएर बस्दै गर्दा उहा (सभामुख)ले सदन स्थगित गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा पनि हामीबीच केही असमझादारी भएको मात्रै हो।